“လူတစ်ယောက်ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်. . . .” - Sainpwar
MMA fighter ဖိုး...
ဖု နျး ငှ�...
“လူတစ်ယောက်ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာမယ်. . . .”
admin | April 6, 2021 | KNOWLEDGE | No Comments
လူတစ်ယောက်သည် ကံကောင်းချင်လာပြီဆိုလျှင် စိတ်တည်ငြိမ်လာခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကင်းကာ စိတ်များကြည်လင်လန်းဆန်းလာခြင်းစသော လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါသည် …။၎င်းစိတ်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းစိတ်ဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည် …။
ထိုစိတ်မျိုး ဝင်လာလျှင် ‘ငါတော့ ကံကောင်းတော့မယ်၊ ဒီစိတ်ဟာ ကောင်း ကံပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းခံစိတ်ပေပဲ’ ဟု သဘောထားကာ ထိုစိတ် ကို ပျောက်ပျက်မသွားရအောင် ထိန်းထားပြီး ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ယူရမည် ဖြစ်သည် …။
ထို့အပြင် အများဆုံး ပြုလုပ်ဖြစ်လေ့ ရှိသည့် လေ့ကျင့်နေစရာ အထူး မလိုသော သမားရိုးကျ မကောင်းကံဘက်သို့ ပြန်ပြောင်းနောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်မိစေရန်လည်း အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လှူချင်တန်းချင်စိတ်ပေါက်လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဒီကံလေး အထမြောက်အောင် ငါ လှူပေးဦးမှ’၊ သီလဆောက်တည်ချင်စိတ် ပေါက် လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်း လာပြီ၊ သီလလေး ဆောက်တည်ပြီး နေဦးမှ’
ဘုရားရှိခိုးချင်စိတ် ပေါက်လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ ပူဇော်လိုက်ဦးမှ’၊ ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်း ပွါးများချင်စိတ်၊ တရားအားထုတ်ချင်စိတ်
ပေါက်လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ပွါးများဖြစ်အောင် ပွါးများလိုက်ဦးမှ၊အားထုတ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်လိုက်ဦးမှ’ စသည်ဖြင့် ကောင်းကံများအထမြောက်အောင်မြင်စေရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ် သည်။ ကောင်းစိတ်
များပေါ်လာပြီး ကောင်းကံများကိုပြုလုပ် အားထုတ်ဖြစ် လျှင် အခွင့်အရေးကောင်း၊ အခြေအနေကောင်းများ ရလာပြီဟု မှတ်ယူရ မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအခွင့်ကောင်း၊ အခြေအနေကောင်းများကို လက်မလွတ်စေ ရန် လွန်စွာ အရေးကြီးပါသည် …။ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်း ကျန်းမာရွှင်လန်း ငြိမ်းအေးနိုင်ကြ ပါစေ ~~
အနုပညာရှငျမြားရဲ့ ဂုဏျပွုခြီးကြူးစကားဆိုခွငျးကို ခံရတဲ့ အလှမယျဟနျလေး
Dr Sasa မှ ပနျကွားခကျြ …
စိတျမကောငျးလို့ အဘှားကိုတှရေ့ငျ အသီးတှအေားပေးကွပါနျော…
ဒီနလေဲ့ ရနျကုနျကတဈဦးက ဒီညီလေးအတှကျ လဆေိုငျထောငျပေးဖို့ ဆကျသှယျလာပါတယျ အားလုံးလေးဦးရှိပါပွီ
MMA fighter ဖိုးသော်မှာအပြစ်မရှိကြောင်း အောင်လအန်ဆန်ပြောပြီ
လကျဝှဖေို့ကျတာ ဖိုးသျောရဲ့နောကျဆုံးအခွနေကေ စိတျမကောငျးစရာတှခေညျြးပါဘဲ
ပှဲတဈခုမှာဖြျောဖွဖေို့ရှိတာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အထငျအမွငျမလှဲစဖေို့ ကွိုတငျပွီး ရှငျးပွလာတဲ့ အေးမွဖွူ
ဖု နျး ငှေ ဖွ ညျ့ က ဒျ မြား ခဲ ခွ ဈ လှ နျ သှား ပွီး ပ ငျ နံ ပါ တျ မြား ပြ ကျ ကု နျ ရ ငျ လှ ငျ့ မ ပ ဈ ကွ ပါ န ကျ ပွ နျ သုံး လို့ ရ တဲ့ န ညျး လ မျး လေး အ သိ ပေး ပါ ရ စေ
❝တိုကျပှဲတှေ မပွီးမခွငျး အနားမယူဘူး ဆိုတဲ့ ပွညျ့သူတပျမတျောKNUရဲ့အမှာစကား❞
တစ်ရက်ကို (၁၂)နာရီပဲ အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တောင် သူရဲ့ကျန်တဲ့အသက်ကို ညီလေးနဲ့အတူမျှဝေပြီး ရှင်သန်ချင်ကြောင်းဖွင့်ဟလာတဲ့ ကိုကို